Ishikawa စီရင်စုရဲ့ ဒေသထွက် ကြွေထည်ပစ္စည်း !!!! - JAPO Japanese News
Ishikawa စီရင်စုရဲ့ ဒေသထွက် ကြွေထည်ပစ္စည်း !!!!
စ 18 Jul 2020, 17:57 ညနေ
Ishikawa စီရင်စုရဲ့ ဒေသထွက် ကြွေထည်ပစ္စည်း 九谷焼(くたにやき) !!!
အစိမ်း၊ အဝါ၊ အနီ၊ ခရမ်းရောင်နှင့် စိမ်းပြာရောင် စသည့်ရောင်စုံသော ဂျပန်အရောင်များဖြင့် အလှဆင်ထားတဲ့ လှပသောကြွေထည်တွေဖြစ်ပါတယ်။
၁၇ ရာစုအစောပိုင်း အဲဒိုခေတ်မှာတော့ အနုပညာကြွေထည်ပစ္စည်းအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု၊ တောက်ပမှုတို့ဖြင့်စတင်ခဲ့သော်လည်း ၁၇ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာတော့ ရုတ်တရက်ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ၁၈၀၀ ဝန်းကျင်ပိုင်းလောက်မှာ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး ပေါ်ထွက်လာကာ လူတွေကိုဆွဲဆောင်စေတာကတော့ အခုထက်ထိပါပဲ။
အားလုံးပဲ စား‌သောက်ဖွယ်ရာတွေတည်ခင်းတဲ့အခါ လှည့်ကွက်တွေရှိတယ်ဆိုတာ သိပါသလား ?
ဟင်းလျာများတွေဟာ လှပတဲ့ ပန်းကန်တွေနဲ့ တည်ခင်းလိုက်ရင် စားပွဲကို အရောင်တောက်ပစေပါတယ်။
ထမင်းစားပွဲမှာ အမှန်တကယ်အသုံးပြုထားတဲ့ ကြွေထည်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။
အတူတူညစာစားရင်တောင် ပန်းကန်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့်တဲ့ ဇိမ်ခံ ခံစားမှုကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Kaburaki Shoho ကဒီလို အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ Kutani ကြွေထည်ရဲ့ သမိုင်းအသစ်ကို ဖန်တီးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
Kutani ကြွေထည်ကိုတော့ ၁၈၂၂ ခုနှစ်၊ Ishikawa စီရင်စုနယ် Kanazawa မှာ ပထမဆုံးအဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Kanazawa ရှိ Kutani ကြွေထည်များရဲ့ လက်ရှိရော ရိုးရာအစဉ်အလာဟောင်းများမှ လက်ရာတွေကို ရော ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားလျက်ရှိပါတယ်။
ဂျပန်နှင့် ပြည်ပရှိ များစွာသောပြပွဲများတွင် ဆုများစွာရရှိခဲ့ပြီး Kutaniကြွေထည်ကုန်ပစ္စည်းများရဲ့ တန်ဖိုးမှာလည်း ကမ္ဘာသို့ဖြန့်ဝေရာတွင် အရေးပါတဲ့ နေရာမှာ ပါ၀င်ပါတယ်။
ဒီလို လှပတဲ့ ကြွေထည်တွေရဲ့ စိန်ခေါ်မှုအသစ်များထဲမှာ Kaburagi ဝိုင်ဖန်ခွက် ကအပါအဝင်ပါပဲ။ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ဒီလုပ်ငန်းကို စိတ်အားထက်သန်တဲ့သူများနှင့်အတူဂျာမနီ SPIEGELAU ဖန်ခွက်။ ဒီမှာတော့ Kutani ကြွေထည်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လှပသောဖန်နှင့် Kutani ကြွေထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီပေါင်းစပ်အသစ်တခုအနုပညာအဖြစ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ဝိုင်ကြိုက်တဲ့သင့်အတွက် . . .သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဝိုင်ကို လှပတဲ့ ဖန်ခွက်ထဲထည့်သောက်နေတယ်ဆိုပါစို့ . . . ဒီလို ကိုယ့်ရဲ့ ပုံစံလေးကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါလား ?
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ရရှိနိုင်သောနေရာများ
Kaburaki Kutani Ware ပြတိုက် (Kutani ကြွေထည်၊ Kaburagi စတိုး Kanazawa Kutani Myusium)
1-3-16 Nagamachi, Kanazawa, Ishikawa စီရင်စု
9: 00-22: 00 ဖွင့်သည် (တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာနေ့နှင့်ရုံးပိတ်ရက်များတွင်မနက် 9: 00 မှ 18: 00 ) ပုံမှန်မဟုတ်သောရုံးပိတ်ရက်များ
အရသာရှိသော Ippuku Kaburagi
10:00 – 22:00 (တနင်္ဂနွေနေ့များ၊ တနင်္လာနေ့များနှင့်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များတွင် 10:00 – 18:00) ပုံမှန်မဟုတ်သောရုံးပိတ်ရက်များ
1-3-20 Nagamachi, Kanazawa, Ishikawa စီရင်စု
9:00 – 18:00 ပုံမှန်မဟုတ်သောရုံးပိတ်ရက်များ
Kutani ကြွေထည် Website
အံ့ဖွယ် Kinoshita Dai ဆပ်ကပ် !!!!
ဘတ်စ်နဲ့တက္ကစီတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် ဂျပန်အစိုးရကတစ်ဝက်ထောက်ပံ့မည်
(၅) ရက်နေ့၊ တိုကျိုတွင်ဒုတိယအချီ ၁၀၀၀ ကျော်ကူးစက်မှုရှိ !!!